Ko Mist Fani Inopa Imwe Nani irinani kune Mhepo Inodziya?
Maindasitiri Fans Series
Axial Fans Uye Zvishongedzo
Kune nzira dzakawanda dziripo dzekutonhodza zvakatipoteredza uye kudzikisa kupisa kunopisa. Nzvimbo inopisa inoderedza mwero wesimba remuviri wedu uye isingatibvumidze kuisa tarisiro yakazara mune chero basa. Tinonzwa kusagadzikana kana tembiricha yakakwira nekuti kuburitsa ziya ziya kubva mumuviri wedu kunowedzera. Saka kudzikisira tembiricha yenharaunda yedu chimwe chinotonhorera chinofanira kuve chiripo. Kazhinji vanhu vanosarudza mhepo inodziya kana mhepo inotonhorera kuti itonhorere imba yavo kana hofisi.
Pane imwe nzira itsva inonzi mhute vateveri izvo zvinowanikwa mumusika asi hazvisati zvazivikanwa zvakadaro. Mist Fans hazvidi kugara uchichengetwa senge yekuchenesa uye hauna kana nhuhwa nekukanganisa. Zvese zvinoda kuzadza mvura zuva nezuva inova chete chidimbu chinodiwa kune anotonhorera emhepo.
Ngatinzwisise Sei Mist Fans vari Nani Dzakasiyana pane Anononoka Mhepo
Ehe mari yekutanga yeiyo mhute vateveri inopfuura mhepo inotonhorera asi inoshandisa mashoma mvura yekukanganisa uye kutonhora kupisa pane anotonhorera emhepo. Kunyangwe mhepo inotonhorera isingadhuri ivo vanoshandisa yakawanda mvura kuishandisa ichiramba. Pasina mvura yakakwana mutangi remvura inotonhorera haigone kuita kuti nharaunda itonhorere. Uye kushandiswa kwemvura yakawanda panguva yekushomeka kwemvura kunoita kuti mhepo inotonhorera ive sarudzo yakaipa.
Kugara uchichenesa mhute fan hazvidiwe kunzvenga hwema hwakaipa. Mist Fans zvinobudirira zvinomisa nhunzi nezvipembenene zvisingafadzi uye zvinobvisa guruva uye zvinopfungaira zvoga. Izvi zvinoita kuti ive yakanaka inotonhorera sarudzo nekutidzivirira kubva kwakasiyana hutano nyaya. Ipo tangi remvura uye mapedhi emvura anotonhorera emhepo anoda kugara achicheneswa kuitira kudzivirira hwema hwakaipa. Nhunzi uye zvipembenene zvinokuvadza zvinogona kupinda nyore nyore mumhepo inotonhorera uye guruva & utsi zvaisagona kumiswa. Izvi zvinowanzo kuumba matambudziko akasiyana ehutano.
Kana iyo mhute vateveri akaiswa panze kunge girini imba ipapo inogona kubatsira zvirimwa nekuwedzera humidity level uye zvakare inotonhorera pasi yakakomberedzwa Warehouse zvakare inoshandisa iyomhute fan kuchengetedza zvinhu zvavo zvekudya zviri zvitsva kuitira kuti zvive zvinofadza kune vashandisi. Asi nemhepo inotonhorera inochengetedza hunyoro hwezvirimwa kana kuchengetedza zvigadzirwa zvinodyiwa zvitsva hazvigone kuitwa nemazvo.
Mist fansinogona kuiswa nyore nyore pese pese, zvinofambika zviri nyore uye inovhara nzvimbo shoma. Ndichiri kufema mhepomhute fan haina kukanda madonhwe emvura uye inoita kuti nharaunda inyorove. Ipo, yakawanda inotonhorera yemweya yakakura kana ichienzaniswamhute fans uye inoda imwe nzvimbo kupfuura mhute fan. Vanoda kuedza kutamira kune dzimwe nzvimbo uye vanoda nzvimbo yakatarwa yavo. Iyo inokanda iyo madonhwe emvura izvo zvinogumbura dzimwe nguva.
Naizvozvo, kuwedzera humidity mukati memba kana mweya wekufema usipo mhute fan inomira sesarudzo iri nani. Inoita mvura inopwa, inodzora tembiricha yakawandisa uye inopa zvirinani kune nharaunda.
Adress:Kwete 388 Linruo Road, Songmen Town, Wenling City, Zhejiang Province